Fanamparam-pahefana teny 67 ha : zandary mpiambina olom-panjakana nandrahona tamin’ny basy | NewsMada
Fanamparam-pahefana teny 67 ha : zandary mpiambina olom-panjakana nandrahona tamin’ny basy
Fanamparam-pahefana tsotra izao no anasokajian’ny olona teny 67 ha ny nafitsoky ny zandary iray sy ny namany teny an-toerana ny asabotsy alina teo, tokony ho tamin’ny 8 ora sy 50 minitra alina teo.
Araka ny fanazavana avy amin’ny fokonolona teny an-toerana, nanampatra fahefana ny zandary iray sy ny namany nitondra Daewoo Matiz saika hamonjy fety tao 67 ha Avaratra Andrefana . Ity zandary ity izay voalaza fa mpiambina olona ambony amin’ny andrimpanjakana iray eto amin’ny firenena. Efa nanamarina izany rahateo ny eo anivon’ny polisy.
Misy fandaminana ifotony napetraky ny fokonolona sy ny fikambanana APVR (Association des propriétaires des véhicules resident) miasa eny an-toerana ka nametraka takelaby iray mba tsy hisy fiara miditra fa lalan-tokana ny mihazo ny CEG 67 ha. “Mba ho fandaminana ny fiantsonana sy hampirindra ny fifamoivoizana ny anton’izany”, hoy ny fanazavana. Rehefa notoroana lalana sy ny tokony hatao anefa ilay zandary sy ny namany, niditra an-tery ary nandrahona sy nanapoaka basy rehefa tezitra tamin’ny fandaminana nataon’ireto mpiambina sady manao fanamiana no mitondra “badge”-n’ny fikambanana.
Raikitra ny tabataba teo ka nantsoina ny polisin’ny boriborintany fahafito. Tamin’ny 9 ora sy sasany alina tonga teny an-toerana ny polisy nisambotra azy ireo. Fantatra tamin’izany fa zandary miasa ao amin’ny andrimpanjakana iray izy io.
Araka ny vaovao nampitain’ny fokonolona eny 67 ha, nisy ny fifandaminana teo amin’ilay zandary sy ny fokonolona ary ny fikambanana APVR. “Niaiky ny fahadisoana nataony ilay zandary, nifona sy niala tsiny ka nisy ny taratasy fifanekena natao”, hoy ny fanazavana. Nisy fitoriana napetraky ny fikambanana mantsy ka efa nandray an-tanana ny raharaha ny polisy, ary izao niafara tamin’ny fifandaminana izao.
Na efa milamina aza ity teny 67 ha ity, toe-javatra mamohehitra hatrany satria ireo mpitandro filaminana natao ho fitaratra indray no manakorontana ny fandaminan’ny fokonolona. Manampatra fahefana, ary mahatonga ny olona hanao fitsaram-bahoaka ny toy izao. Iza ihany koa no mendrika ho mpitandro filaminana tsy mahafehy ny asany?